Mpamatsy horonan-tsarimihetsika mitsivalana tsiranoka mora vidy | YiZheng
ny Screener amin'ny varotra Linear mampiasa loharano mahery mihetsiketsika avy amin'ny motera vibration, mihozongozona eo amin'ny efijery ireo fitaovana ary mandroso amin'ny tsipika mahitsy.
Inona ilay masinina fanadiovan-tsipika Linear Vibrating?
ny Mpijery horonan-tsarimihetsika Linear (Screen Line Vibrating Screen) mampiasa fientanam-po amin'ny motera hovitrovitra ho toy ny loharano hovitrovitra mba hampihozongozona ny fitaovana eo amin'ny efijery ary handroso tsipika mahitsy. Ny fitaovana dia miditra ao amin'ny seranan-tsakafo amin'ny masinina fanaraha-maso mitovy amin'ny feeder. Ny haben'ny haben'ny oversize sy undersize dia novokarin'ny efijery marobe ary nesorina tamin'ny fivoahana tsirairay avy.
Fitsipika momba ny asa amin'ny milina fitiliana mivantana
Rehefa miasa ny efijery tsipika, ny fihodinan'ny motera roa dia mahatonga ny exciter hovitrovitra hiteraka hery manosika miverimberina, manery ny vatan'ny efijery hamindra ny efijery lavareny, ka ny zavatra eo amin'ilay fitaovana dia faly ary manipy elanelam-potoana. Amin'izay dia mamita ny asa fizahana fitaovana. Ny efijery mihetsiketsika mivantana dia tarihan'ny motera mihetsiketsika indroa. Rehefa mihodina sy mihodina mihodina ireo motera mihetsiketsika roa, ny hery mampientanentana ateraky ny sakana eccentric dia mifamono amin'ny lafiny hafa, ary ny hery mitambatra mifangaro ao amin'ny lalana longitudinal dia ampitaina amin'ny efijery iray manontolo. Ery ambonin'ny, noho izany, ny lalan'ny fivezivezena amin'ilay milina sivana dia tsipika mahitsy. Ny fitarihan'ny hery mampientam-po dia manana zoro fironana manoloana ny fakan'ny efijery. Eo ambanin'ny hetsika mitambatra ataon'ny hery manaitaitra sy ny fahamaotinan'ny tena fitaovana, ny fitaovana dia atsipy ary mitsambikina mihetsika amin'ny alàlan'ny fihetsiketsehana an-tampon'ny efijery, amin'izay hahatratrarana ny tanjon'ny fisavana sy ny fanasokajiana ny fitaovana.
Ny tombony azo avy amin'ny milina fitiliana mivantana
1. famehezana tsara ary vovoka kely dia kely.
2. Fanjifana angovo ambany, tabataba ambany ary androm-piainana maharitra amin'ny efijery.
3. Famaritana avo lenta, fahaiza-manao fanodinana lehibe ary rafitra tsotra.
4. Rafitra mihidy tanteraka, fivoahana mandeha ho azy, mety kokoa amin'ny fiasan'ny tsipika fivoriambe.
5. Ny faritra rehetra amin'ny vatan'ny efijery dia soloina amin'ny takelaka vy sy ny mombamomba azy (mifamatotra eo anelanelan'ny vondrona sasany ny kofehy). Ny henjana ankapobeny dia tsara, mafy orina ary azo itokisana.
Linear Vibrating Screening Machine Video Display
Safidy maodely Screening Machine Linear
Teo aloha: Milina Rotterie Drum
Manaraka: Milina fehikibo fehikibo
Fatana rivotra mafana
Fampidirana Inona no atao hoe fatana mafana-rivotra? Ny fatana mafana-rivotra dia mampiasa solika handrehitra mivantana, hamoronana fipoahana mafana amin'ny alàlan'ny fitsaboana amin'ny fanadiovana avo lenta ary hifandray mivantana amin'ny fitaovana hanaovana fanafanana sy fanamainana na fanendasana. Nanjary vokatra fanoloana loharanom-pahalalana herinaratra sy loharanom-pahalalana hafanana nentin-drazana tamin'ny indostria maro. ...
Fampidirana Inona ny milina poloney boribory biolojika? Ny zezika voajanahary voajanahary sy ny zezika zezika mitambatra dia manana endrika sy habe. Mba hahatonga ny granules zezika ho tsara tarehy, ny orinasanay dia namolavola milina fandotoana zezika organika, milina fandefasana zezika mitambatra ary ...
Fampidirana Inona no ilana ny masinina Cage Mill Cage Mill? Ny milina famokarana vatan-tsolika simika dia an'ny milina tranom-borona marindrano. Ity milina ity dia natao araka ny fitsipiky ny famotehana ny fiatraikany. Rehefa mihodina amin'ny lalana mifanohitra amin'ny hafainganam-pandeha avo ny tranomaizina anatiny sy ivelany, potika ny fitaovana f ...